Ngọnarị - Modellpilot.EU
Ibu maka ọdịnaya
Dịka onye na-ahụ maka ọrụ anyị nwere ọrụ dị ka § 7 Abs.1 TMG maka ọdịnaya nke dị na n'akụkụ ndị a dịka iwu zuru oke. Dị ka §§ 8 si 10 TMG, Otú ọ dị, anyị dịka onye na-ahụ maka ọrụ agaghị ekpuchi ntụgharị ma ọ bụ ozi echekwara echekwa ma ọ bụ iji nyochaa ọnọdụ ndị na-egosi ọrụ na-akwadoghị. Okwute iji wepu ma ọ bụ gbochie iji ozi n'okpuru iwu zuru oke anọgideghị na-emetụta ya. Otú ọ dị, ụgwọ a na-akwụ na nke a, ọ ga-ekwe omume site na ụbọchị ịmara nke a kapịrị ọnụ. N'elu ọkwa nke mmebi iwu kwesịrị ekwesị, anyị ga-ewepu ọdịnaya a ozugbo.
Ibu nke njikọ
Onyinye anyị nwere njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ nke ndị ọzọ na ọdịnaya anyị enweghị mmetụta. Ya mere, anyị enweghị ike iburu ibu ọ bụla maka ọdịnaya ndị a. Onye na-enye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ nke ibe ndị a na-arụ ọrụ maka ọdịnaya nke ibe ya. A na-enyocha akwụkwọ ndị a jikọtara maka mmebi iwu nwere ike ime na oge ejikọta ya. Enweghi ike ighota ọdịnaya ejighi iwu na oge ejikọta ya. Otú ọ dị, njikwa ọdịnaya dịgide adịgide nke njikọ ndị a jikọtara abụghị ihe ezi uche dị na ya n'enweghị ihe àmà doro anya nke mmebi iwu. N'elu ọkwa nke imebi, anyị ga-ewepụ njikọ ndị ahụ ozugbo.
Ọdịnaya na ọrụ ndị a peeji nke kere site na saịtị ahụ maka ọrụ bụ n'okpuru German nwebisiinka iwu. Iṅomi, edezi, Nkesa ọ bụla ụdị nrigbu na-abụghị ókè nke nwebisiinka achọ dere nkwenye nke akwụkwọ ma ọ bụ Onye Okike. Downloads na mbipụta na-kwere nanị maka oji, abụghị nke azụmahịa were. Insofar dị na ọdịnaya bụ kere site ọrụ, na nwebiisinka nke ọzọ. Onyinye nke ọzọ na-akara dị ka ndị dị otú ahụ. Kwesịrị na ị ka na-maara nke nwebisiinka ịda iwu, anyị na-arịọ maka ndumodu. N'elu ngosi nke imebi, anyị ga-ewepu ihe ọdịnaya ozugbo.